अचानक छोरीको मोबाइल आमाबाबु खोलेर हेर्दा उ’ड्यो हो’सह’वास , गर्दै रहेछिन यस्तो काम ! - नमुना पोष्ट
अचानक छोरीको मोबाइल आमाबाबु खोलेर हेर्दा उ’ड्यो हो’सह’वास , गर्दै रहेछिन यस्तो काम !
एजेन्सी। चीनमा एक महिलाले नयाँ मोवाइल फोन किनेपछि पुरानो फोन ११ वर्षकी छोरीलाई खेलाउन दिइन् । त्यस बेलादेखि त्यो फोन छोरीको खेलौनाहरुको एक हिस्सा बन्यो । छोरी दिनहुँ त्यो फोन खेलाउँथिन् । आमाबाबुले छोरीले फोनमा के गर्दैछिन् भन्नेतर्फ चासो दिएका थिएनन् । ६ महिनापछि उनीहरुलाई थाहा भयो कि छोरीले फोनमा के गर्दिरहिछिन् । छोरीको क’र्तुतले उनीहरुको होसहवास उडेको छ ।
घ’टना हुबेइ प्रान्तको जिंगझोउ सहरको हो । यहाँकी लुंग नामकी महिलाले नयाँ फोन किनेपछि पुरानो फोन ११ वर्षकी छोरीलाई खेलाउन दिएकी थिइन् । सुरुसुरुमा छोरीले यसमा गेम खेल्थिन् । फोन चालु अवस्थामा भएकोले एक दिन उनले आफ्नै फोनबाट बाहिरबाट नास्ता मगाइन् । यसको पैसा तिर्नको लागि उनले आमासँग बैंकको पिन कोड मागिन् । त्यसपछि भने उनलाई बैंकको पिन याद रहन्थ्यो ।
विस्तारै उनले पुरानो फोनमा इन्टरनेटमार्फत लाइभ स्ट्रिमिङ शो हेर्न थालिन् । यस्ता शोहरु हेर्न पैसा तिर्नुपथ्र्यो । उनले आमाबुवाको बैंक खाताको पिन नम्बर प्रयोग गरेर बैंकबाट पैसा ति’र्दै शो हेर्न थालिन् । यस्ता शो हेर्न उनले मोटो रकम फोनबाटै तिर्न थालिन् । मातापिता भने यसबाट पूरै अञ्जान थिए । यतिमात्र होइन उनले फोनमै अनलाइन भिडियो गेम पनि खेल्न थालिन् । यो सब गरेर उनले मातापिताको बैंक खाताबाट करिब ११७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिन् ।
पुरानो फोनमा पैसा तिरेको नोटिफिकेशन आउँदैनथ्यो त्यसैले मातापिताले यति ठूलो रकम खर्च भएको थाहा पाएनन् । करिब ६ महिनापछि मातापिताले आफ्नो बैंक स्टेटमेन्ट हेर्दा बल्ल खाताबाट १७ लाख रुपैयाँ बे’पत्ता भएको थाहा भयो । त्यसपछि लुंगले प्रहरीमा रिपोर्ट लेखाउँदै एक जना का’नुन व्यवसायी पनि लिएका छन् ताकि यो पैसा फि’र्ता पाउन सकियोस् ।